2015-2019 Nissan Murano NissanConnect 8-inch Navigation Screen Protector 2015-2019 Nissan Murano NissanConnect 8-inch Navigation Screen Protect - LFOTPP
Home ngwaahịa 2015-2019 Nissan Murano NissanConnect 8-inch Navigation Screen Protector
2015-2019 Nissan Murano NissanConnect 8-inch Navigation Screen Protector
2015-2017 Nissan Murano NissanConnect 8-inch Ihuenyo Ihuenyo
LFOTPP HD Gbanyụọ GLASS MGBE AHỤ Ntanye Na-ekpuchi
NKWU NDỊ NA-ECHICHE, 9H Hardness na 0.25mm Ọkpụkpụ, iko mkpuchi a na-ejide ike aka nke onye ọkwọ ụgbọ ala gị mgbe ị na-ahụ ka ị na-enwe mmetụta dị mma nke na-emetụ n'ahụ, Mgbochi-Ọkụ & Mgbochi.
MGBE NA-EKWU NDỊ NA-EKWU. Ịwụnye mkpuchi ihuenyo agaghị emetụta agba, akara ngosi na mmetụ ihuenyo mmetụ nke ngosipụta GPS gị. Ọ ga-eme ka ọ ghara ịdị ọcha n'ájá, ncha, mmanụ, mmiri na mkpịsị aka, wdg.
Ọ BỤGHỊ ỌZỌ KWESỊRỊ ỌZỌ. Ejiri ya na mkpuchi nkuzi nke na-eme ka mmanu si na mkpịsị aka gị ma na-agbakwụnye ntinyekwuo na ihuenyo nchọgharị.
LASER CUT FOR PRECISE FIT. Ọ dịghị mkpa ka ị belata ọnụ ya, ebe ọ bụ na 2017 2018 Nissan Armada 8 Inch.
GỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỌ AHỤ. Iji na-echekwa ihuenyo GPS gị n'enweghị ntụpọ, kpochapụ ya na ákwà microfiber. Ọ dịghị mkpa iji ihe mkpocha ndị na-emerụ emerụ.
2015-2017 Nissan Murano NissanConnect 8-inch Ihuenyo Ihuenyo Ntugharị Nchedo Nsogbu nke Car, Clear Clear Glass HD ma Chebe Anya Gị
Gini mere O Ji choro Mkpa Nchedo Nava?
Na-egbochi mkpịsị akwụkwọ ahụ na-emenye ihuenyo.
Chebe ihuenyo gị site na Icha, Ngbawa na Debris.
Chebe ihuenyo gị site na mmanụ ma ọ bụ ihe ndị ọzọ ruru unyi, belata ike ike gị.
Mgbe ị na-eji ụgbọala gị na nwa gị nwoke mara mma, ị ga-ahụ ya / ihu ya.
Kedu ihe na-eme ka ihe nkiri nchedo ahụ bụrụ nke pụrụ iche?
1.Ọhụhụ na-adịchaghị mkpa ga-emetụta mmetụta nke Touch, dị mma na mmetụ aka ka mma.
Ike 2.9H nwere ike hụ na ọ ga-eguzogide ọgwụ, na-egbochi nkwekọrịta nke ihe siri ike na esemokwu, arụmọrụ ndị ọzọ.
3.HD N'uzo kachasị weghachite agba, iji mee ka onye ọrụ uzo doro anya ma nwee ezi ogwugwu.
4.Easy iji wụnye, Mgbasa ozi Mgbasa ozi akpaaka nwere ike n'ụzọ dị irè belata mkpịsị aka na mmanụ, mmiri dị ọcha nakwa dị ka afụ n'efu.
Kedu ụgbọ ala dabara maka ihuenyo ahụ?
2015-2017 Nissan Murano NissanConnect 8-inch Navigator (Ọpụrụiche maka Nchebe ihuenyo mbu / Car Ngosiputa usoro GPS Ihuenyo Nchedo / Igodo Ihuenyo mmetụ Nchedo / Ntanye Nchekwa ihuenyo / nyochaa ihe nchebe ihuenyo / LCD Protector Screen and Panel Panel Screen Screen Protector / Dashboard Screen Onye nchebe)
1 X Nchekwa ihuenyo mbugharị
1 X Wụnye Ngwaọrụ Nlekọta (Pịmpụl Sucker * 1, Dust Removing Stickers * 1, Mkpụrụ Mpịakọta Mmanya * 1, Igwe Nhicha Igwe * 1)
1. Nzaghachi ngwa ngwa, ndị ọrụ ahịa ndị ọrụ ahịa na-eso usoro, maka ọrụ gị;
2. Oge nnyefe ahụ bụ ngwa ngwa, ma ọ bụ ngwaahịa na ngwaahịa ma ọ bụ iji mee ya, anyị ga-anwa anyị kacha mma iji bupu ya ngwa ngwa.
3. Nzaghachi ozi ezipụ na oge kwesịrị ekwesị, ka itinye uche gị na azụmahịa gị, na-enweghị ihe dọpụ uche site na ịzụta.
4. Ụdị dịgasị iche iche, anyị na-agbalịsi ike ịbụ onye na-azụ ngwaahịa, ma soro gị rụọ ọrụ iji melite usoro iheomume iji gboo mkpa ahịa.
Anyị ga-eziga gị ihe eji dochie anya n'efu:
LFOTPP bụ ọkachamara ọkachamara na mmepe, imewe, mmepụta na ịzụ ahịa ihe nkiri ọkụ.
E nwere ọtụtụ ihe eji emepụta ngwá ọrụ na-arụpụta ụgbọala, na nkọwa na ụdị nke ngwaahịa ndị ahụ nwere ike ịmepụta ma mepụtara.
Anyị na-esi ọnwụ na onye ahịa ahụ, ọ bụrụhaala na anyị na - eme ya, anyị ga - enye gị ezigbo mmesi obi ike. Ụlọ ọrụ ahụ ga - enye ndị ahịa mkpa nke ọsọ na àgwà.
Anyị na-ejikọta ọtụtụ afọ ọkachamara ọkachamara, ụlọ ọrụ ahụ anọgidewo na-agbaso "iguzosi ike n'ezi ihe, mma, kwụsie ike, ihe ọhụrụ" nkà ihe ọmụma achụmnta ego, ịnụ ọkụ n'obi iji nye ndị ahịa anyị àgwà ka mma, ụgwọ ndị ka mma, ọrụ na-enye afọ ojuju karị,
Anyị na-eji nlezianya na-elekọta nkwekọrịta, Ọrụ, hụ na ọganihu, àgwà nke ọ bụla n'usoro, ma mepụta a maara nke ọma onwe nhazi emeputa.
Gbalịsie ike inweta mmepe ọsọ ọsọ, nabata ndị enyi azụmahịa ka ha kwurịta azụmahịa!
2017 2019 Nissan Armada NissanConnect 8-Inch Navi Screen Protector
2017 2019 Nissan GT-R NissanConnect 8-Inch Navi Screen Protector